Maxaa iska bedeley go’aankii mucaaradka ee mudaharaadka Muqdisho kadib diidmadii dowladda. | WWW.REGULARNEWS.NET
Maxaa iska bedeley go’aankii mucaaradka ee mudaharaadka Muqdisho kadib diidmadii dowladda.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa markale ku celisey inaysan aqbali doonin isu soo baxyo iyo mudaharaadyo ka dhaca magaalada Muqdisho sababo la xiriira cabsiada dhanka ammaanka iyo soo laba kaclaynta Covid19.
Wasiir wasaaradda amniga xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Xundubeey ayaa sheegay in Go’aankii ay Khamiistii hore soo saareen Sababaha Covid 19 Faafitaankiisa awgeed ay ujoojiyeen in dadyoowga hal meel la iskugu keeno.
Hadaba Maxaa Iska Badelay Go’aankoodii Mucaarad?
Gudoomiyaha Xisbi Siyaasadeedka SAHAN C/kiriin Xuseen Guuleed oo ka mid ah Midowga Murashaxiinta Madaxweyne ayaa galabta usheegay BBC SOMALI in aysan waxba ka badelin oo Banaanbax ay qabsan doonaan Jimcaha la iskuguna iimaan doono Taalada Daljirka Dahsoon.
Guuleed ayaana sheegay in Awood aan loo isticmaali Karin Dibad baxa nabadeed iyagoo dhigaya,wixii dhibaato ka dhashana uu mas’uuliyadeeda qaadi doono Farmaajo.